टोल फ्री ग्राहक सेवा लाइन कल गर्नुहोस् (१-1-844२-892))
एक स्टोर क्यासियरलाई सोध्नुहोस् तपाईंको ब्यालेन्स जाँचको लागि तपाईंको कार्ड स्लाइड गर्न।
सँधै तपाईंको eWIC कार्डमार्फत पहिले भुक्तान गर्नुहोस्, त्यसपछि SNAP, त्यसपछि अन्य प्रकारको भुक्तानी (नगद, क्रेडिट, डेबिट)।
* यदि तपाईंको कार्ड छ भने हराएको, चोरी भएको वा बिग्रिएको तुरून्त टोल फ्री ग्राहक सेवा लाईन कल गर्नुहोस् (१-1-877२- .892)) यसलाई निस्क्रिय गर्न। प्रतिस्थापन कार्ड 3084-- 5- व्यापार दिन भित्र तपाईंलाई पठाउन सकिन्छ। यदि यो महिनाको अन्तिम १० दिन भित्रमा छ र तपाईं पठाइएको प्रतिस्थापन कार्डको लागि पर्ख्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं नयाँ स्थानीय कार्ड लिनको लागि तपाईंको स्थानीय WIC क्लिनिकमा जान सक्नुहुन्छ।
पिन सेट नभएसम्म तपाईंको eWIC कार्डले काम गर्ने छैन।
फोनमा: टोल फ्री ग्राहक सेवा लाइन कल गर्नुहोस् (१-1-- 877 २ .892)) र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्।
"खाता सेवाहरू" क्लिक गर्नुहोस्
तपाईंले आफ्नो WIC क्लिनिक कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। सँधै निश्चित गर्नुहोस् कि WIC सँग तपाईंको हालको मेलि address ठेगाना र zip कोड छ किनकि जहाँबाट पठाईएको प्रतिस्थापन कार्ड पठाइनेछ।
तपाईंले आफ्नो खाना बेनिफिटहरूमा कुनै सम्भावित परिवर्तनहरू छलफल गर्न तपाईंको WIC क्लिनिकमा सम्पर्क गर्न आवश्यक पर्दछ।
यदि म उत्पादन किन्न सक्षम भएँ भने म के गर्ने? मलाई लाग्छ WIC- अनुमोदित हो?
तपाईंको लाभ ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस् निश्चित गर्न तपाईंसँग उपलब्ध बेनिफिटहरू छन्
उत्पादनको फोटो लिनुहोस् र पठाउनुहोस् WICUPC@dhw.idaho.gov समीक्षाको लागि। फोटोहरूमा समावेश हुनुपर्दछ:
यदि तपाईंको कार्ड हरायो, चोरी भयो वा बिग्रियो भने, टोल फ्री ग्राहक सेवा लाइन (१-1-844२-892)) कल गरेर तुरुन्त रिपोर्ट गर्नुहोस्।
यदि तपाईं आफ्नो पिन सम्झन सक्नुहुन्न वा तपाईंको खाता लक गरिएको छ भने, टोल-फ्री ग्राहक सेवा लाइनमा कल गर्नुहोस् (१--1-844२-892-3084)) वा तपाईंको पिन परिवर्तन गर्न ebtEDGE पहुँच गर्नुहोस्।